kbs — Fri, 09/23/2011 - 21:06
रफ्ता-रफ्ता वो मेरी हस्तीका सामां हो गए
पहेले जां फिर जानेजां, फिर जानेजाना हो गए।
मेहदी हसनले गाएको यो गजल कोठामा बजिरहेको थियो, हामी ध्यानमग्न भएर सुनिरहेका थियौँ।
kbs — Fri, 09/23/2011 - 21:00
म बिहानै उहाँको घरमा पुगेँ। तर, उहाँ कतै निस्किसक्नु भएको रहेछ। सार्वजनिक बिदाको दिन थियो। दिउँसो कुनै समय आउनु पर्ला भन्ठान्दै फर्किएँ।
kbs — Fri, 09/09/2011 - 03:36
भवानी घिमिरेसँग बिताएका केही क्षण
kbs — Sat, 09/03/2011 - 14:04
म जोरपाटी गा.वि.स. कार्यालयको अध्यक्षको हैसियतले सेवाग्राही जनताहरूसँग छलफल गर्दै थिएँ । मैले कहिले काँही टेलिभिजनको पर्दामा झल्याकझुलुक देखेको अग्लो फूर्तिलो कमिज-सुरुवाल, स्टकोट लगाएर शिरमा नेपाली ढाका टोपी लगाएको पाको मान्छे मेरो अगाडि उभिएर "नमस्कार अध्यक्षज्यू," भनेर हात मिलाउन अघि सर्नु भयो ।
kbs — Sat, 09/03/2011 - 13:35
निजी अतीतका अविस्मरणीय प्रसङ्गहरूको कलात्मक उत्खनन् हो संस्मरण । यो उत्खनन् कार्य एकमुष्ट रूपमा नभएर किस्ताबन्दीमा गरिन्छ ।
हाम्रा नेपालीले असाध्यै धेरै भक्तिभाव राख्ने बदरीनाथधामको यात्रा संस्मरणमा मैले बराहक्षेत्रको महिमाका बारेमा लेखेको थिएँ झण्डै दुई दशक अघि ।
नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सब कतार-२०११ मेरो नजरमा
kbs — Thu, 08/18/2011 - 20:20
चलचित्र भन्नाले मेरो बुझाइमा एउटा समय बर्बाद गर्ने खेल हो जहाँ केही पात्रहरू विभिन्न बहानामा नखरा पार्छन, मनोरन्जनको नाममा मुर्ख दर्शकलाई लुट्छन, संदेश मुलक र चेतना मुलक चलचित्रको नाममा विसंगति र अस्लिलाता देखाउछन । किनकि मैले १२, १५ वर्षसम्म हेरेको चलचित्रबाट त्यही सिकेको थिएँ र पाएको थिएँ र अझै पनि नेपाली चलचित्र त्योभन्दा माथि उठ्न सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन पनि । तर यहाँनिर बडो गजबको कुरा र गर्वको कुरा मैले के पाएँ भने आदिवासी चलचित्र कुनै पनि बिदेशी चलचित्रभन्दा मैले कमको पाँईन । जुन मैले नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सब कतार-२०११ बाट थाहा पाएँ । केही समय अघिसम्म साथीहरूको आग्रहलाई सिधै इन्कार गर्दै आफूलाई चलचित्र उति रुची नभएको बिषय हो भन्दै आएका थिएँ । तर अन्तमा जानै पर्ने बाध्यता पर्न आयो । एकदुई जना साथीको आग्रहलाई मैले इन्कार गर्नु उचित लागेन । त्यसो त महिनाको अन्तिम अवस्थामा हुनाले गोजीमा दामको खोजीमा घुन दौडिँदैको अवस्था पनि थियो । किनकि चलचित्र हेर्नका निम्ति एउटा टिकट बराबर ५० रियल (नेपाली १ हजार) चाहिन्थ्यो । त्यसो त ५० रियल जोहो गर्न नसक्ने मान्छे त म कहाँ हुँ र ? पहिल्यै देखि चलचित्र हेर्ने मनस्थिति नभए पछी सबै पैसो खर्च गरी भ्याइसकेको थिएँ ।
kbs — Sun, 08/07/2011 - 17:54
'सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकुन्' भन्ने नेपाली उखानको ठिकविपरित मलाई जीवनको अन्त्यमा एक्लिनुपर्छ भन्ने कहाँ थाहाँ थियो र ! उसो त हामी आफ्नो बुवाको पाँचभाइ दाजुभाइ थियौँ ।
kbs — Tue, 07/26/2011 - 19:14
"शुभ सन्ध्या,भद्र महिला आर भद्र लोक", श्रुतिमधुर बाङ्लाभाषामा ओइक्को पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष जाँगरिला युवा कवि सलाहुद्दीन खान कुटुले उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिहरूको अभिवादन गरेर औपचारिक कार्यक्रमको सुरूवात गरे ।
नेपाली सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डलको चीन भ्रमण
kbs — Mon, 07/11/2011 - 19:17
वि.सं. २०१३ साल असार ५ गतेका दिन साँझपख एक जना ड्राइभर मोटर साइकलमा मलाई खोज्दै आए । उनी टङ्कप्रसाद आचार्य कहाँबाट आएका रहेछन् । आउनुको कारण सोधेपछि म उनकै पछाडि बसेर गएँ ।
तिमीले तिम्रो जीवनको पहिलो र अन्तिम दिनका लागि पहिलो पाठशालामा टेकिसकेपछि तिम्रो शिक्षारम्भ गाउँमै विष्णु मामाले आफ्नो दुवारमा राखेका मास्टरजीसमक्ष भयो । मास्टरजी बिहान बेलुकाको खाना त विष्णु मामाकै घरमा खान्थे तर भिन्सर (बिहान) को जलखैचाहिँ उनीसँग पढ्ने तिमी विद्यार्थीहरूले पालैपालो झर्काको गहिरो थालमा राखेर लगिदिनुपर्थ्यो । उनको जलखैमा हुन्थ्यो सिलौटोमा मसिनो गरी पिसेको हरियो नुनखुर्सानीमा तिखो राग आउने करूवा तेल तपतप चुहिने गरी मसमसी मुछेको भुजा (खट्टे) । यतिमात्र होइन, भकभक उम्लिरहेको करुवा तेलमा भुक्क-भुक्क उठेर पट्पटी फुट्ने गरी तारेको रातो खुर्सानी तर कालो भइसकेको । मास्टरजी सबभन्दा पहिले तिमीहरूकै अगाडि जिब्रो पड्काई-पड्काई तिम्रा बतियारी (तिमी होइन नि) ले लगिदिएका जलखै ‘सी ... ऽ ... ऽ ... सी ... ऽ ... ऽ ...’ गर्दै खान्थे । त्यतिबेला तिमीहरूका जिब्रामा तरक्कै पानी आउँथे र घुटुक-घुटुक थुक निल्दै एकअर्काको मुखामुख गर्दै बस्थ्यौ । जलखै खाइसकेपछि मास्टरजी ठाडो घाँटी लगाएर किलकिले तल र माथि गर्दै गर्दै एक लोटा पानी एक थोपो पनि भुइामा नझारी घटघटी पिउँथे र पलेटी कसेर विष्णु मामाको ग्वाहालीमा आसनी जमाउँथे । अँ, आसनी भन्दा पो समझेँ, तिमीहरूले चाहिँ आफै आफ्ना लागि ओछ्यान बोरा बोक्नुपर्थ्यो । होइन भने विष्णु मामाका गाईंभैँसीले शौचालय बनाएर भिजाएका गन्धे ग्वाहालीमा चिसै बस्नुपर्थ्यो ।
kbs — Sun, 07/10/2011 - 18:31
ईश्वर बराललाई जब मैले चिन्न थालेँ, म उनको संस्मरण लेख्ने लायक थिइनँ। किशोरावस्थाको कुरो हो। उनका सयपत्री, हिमालचुली र झ्यालबाट प्रकाशमा आइसकेका थिए। मेरो आफ्नो रुचि अनुसार निश्चय नै झ्यालबाटले मलाई सबभन्दा बढी आकषिर्त गरेको थियो। यद्यपि, उनका उल्लिखित अन्य दुई ग्रन्थ पनि नेपाली साहित्यमा कोसेढुंगाको हैसियत राख्छन्।
नेपालको राजधानी काठमाडौँलाई नियालेर हेर्ने अभिलाषा, इच्छा र आकांक्षा प्रत्येक नेपालीको अन्तरमनमा अन्तरभूत हुन्छ। यसलाई त आदिकवि भानुभक्तले अलकापुरी कान्तिपुरी नगरीको विशेषणले पनि विभूषित गरसिकेका छन्।
भन युद्ध कस्को जीतमा छ